Helen Keller. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 20 mitsara yekumurangarira | Zvazvino Zvinyorwa
Helen Keller. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 20 mitsara yekumurangarira
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Biography, Vanyori
Mufananidzo waHelen Keller. Raibhurari yeCongress. Veruzhinji domain.
Helen Keller, munyori weAmerica uye murwiri wezvemagariro, Ini ndakazvarwa pazuva rakaita nhasi muna 1880. Aive munhu wekutanga matsi nemapofu kudzidza uye kupedza kudzidza kuyunivhesiti. Uye nemudzidzisi wake wekusarudza Anne Sullivan, vakanyora mabhuku akati wandei nezve zvakaitika kwavari uye vakapa hurukuro dzakawanda nehurukuro munyika yese, vachitsigira nekuunganidza mari yekubatsira vakaremara. Izvi ndizvo Makumi matatu emitsara yake kuti akatisiya tichirangarira muenzaniso wake weushingi uye kuzvivandudza.
Helen Adams Keller anga asina kana makore maviri paakadaro kurasikirwa kuona nekunzwa nekuda kwekurwara. Zvishoma nezvishoma akadzidza mazita ezvinhu zvaaigona kubata, uyezve matauriro uye kuteerera nemaoko ake.
Kuuya kwemudzidzisi wake Anne Sullivan kumudzidzisa kwaive kwekusarudza uye zvaakaita naye zvakamuendesa kuti agamuchirwe ku Radcliffe Koreji, kwaakadzidza uye akapedza kudzidza. Ikoko akatanga kunyora yake nhoroondo yeupenyu, Nyaya yehupenyu hwangu, iro rakaburitswa muna 1903 uye rinoonekwa serimwe reanokosha kupfuura mamwe ose. Mamwe mabasa pakati pezvinyorwa zvinopfuura gumi nemana nemazana mashanu zvaakanyora zvaive Gonhi rakavhurika, Ida hupenyu uhu o Nyika yandinogara mairi. Aive zvakare mukurumbira wemagariro.
Mabhuku ndeangu Utopia. Iko hakuna chipingaidzo chendangariro chinogona kubvisa mufaro uyu.
Iwo mabhuku anotaura kwandiri pasina zvipingaidzo zvemhando ipi neipi.
Kangani nguva patinofamba munzira dzakafanana, tichiverenga mabhuku mamwe chete, tichitaura mutauro mumwe chete, uye zvakadaro zviitiko zvedu zvakasiyana!
Nyika yangu ingave isingakoshi sei pasina fungidziro.
Izvo zvakanakisa uye zvakanakisa zvinhu muhupenyu hazvigone kuonekwa kana kubatwa, zvinofanirwa kunzwika nemoyo.
Ndiri munhu mumwe chete. Asi ndichiri munhu. Ini handikwanise kuita zvese, asi ini ndinogona kuita chimwe chinhu. Ini handisi kuzoramba kuita "chimwe chinhu" chandinogona kuita.
Husiku hwehupofu hunewo mashura aro.
Nyika isina ruvara kana ruzha inoitwa maererano nezviyero, maumbirwo uye hunhu hunhu, nekuti chimwe nechimwe chinhu chinoratidzwa kuburikidza nezvigunwe zvangu, nguva dzose ichichengeta chinzvimbo chayo chaicho uye kwete semufananidzo usingachinjiki kana uchiratidzwa pane iyo retina, iyo Sezvandinonzwisisa iyo, uropi hwako chete ndihwo hunogona kuidzosera pachinzvimbo chayo chakajairika kuburikidza nebasa risingaperi uye risingaperi.
Kuchengetedzwa kunopfuura chero chinhu mashura. Hupenyu hunogona kunge hunonakidza kana hachisi chinhu.
Hakuna mambo anga asina muranda pakati pemadzitateguru ake, kana muranda anga asina mambo pakati pake.
Rufu hapana chimwe chinhu kunze kwekubva pane imwe kamuri uchienda kune imwe. Nekudaro, pane mutsauko kwandiri, unoziva? Nekuti mune imwe kamuri ini ndichakwanisa kuona.
Izvo zvakanakisa uye zvakanakisa zvinhu munyika hazvigone kuonekwa kana kubatwa, zvinofanirwa kunzwika nemoyo.
Mumakore aya erima nekunyarara, Mwari vanga vachishandisa hupenyu hwangu nechinangwa chandisingazive, asi rimwe zuva ndichanzwisisa uye ndobva ndagutsikana.
Vanhu vazhinji vanowana pfungwa isiri iyo nezve mufaro wechokwadi. Izvo hazviwanikwe nekugutsa zvishuwo zvako, asi nekutendeka kune rakakosha basa.
Kana mumwe musuwo wemufaro ukavharwa, mumwe unovhurika, asi nguva zhinji tinotarisa kumusuwo wakavharwa kwenguva yakareba zvekuti hatisi kuona iyo yakavhurirwa isu.
Hakuna munhu asina tariro akambowana chakavanzika chenyeredzi, kana kufamba nechikepe munyika isina kuwanikwa, kana kuvhura tariro nyowani mumoyo wemunhu.
Kuona ndiko kushanda kwemaziso, asi chiratidzo ibasa remwoyo.
Chengeta chiso chako chakatarisa kuchiedza chezuva uye hauzoone mumvuri.
Kufungisisa ndiko kutenda kunotungamira mukubudirira. Hapana chinogona kuitwa pasina tariro uye kuvimba.
Mumwe haafanire kubvuma kukambaira kana munhu achinzwa kuda kubhururuka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Helen Keller. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 20 mitsara yekumurangarira